के तपाईले पनि खराब सपना देख्नु हुन्छ ? यस्ता छन् कारण र रोकथाम गर्ने सजिला तरिकाहरु जानी राखौं – Annapurna Daily
On Sep 3, 2021 1,416
सपना के हो ? यसबारे अनेक किसिमको मत छ । हाम्रो समाजमा सपनालाई कतिपय संकेतको रुपमा पनि बुझिने गरिएको छ । सपनालाई राम्रो र नराम्रो भनेर पनि छुट्याउने गरिन्छ । सपनालाई कतिले अवचेतन मनको उपज ठान्छन् । कतिले दिनभर देखेको, भोगेकै कुराको पुनरावृत्ति ठान्छन् ।
सपनाले पछि हुनेे घटना-दुर्घटनाबारे समेत संकेत दिने ठानिन्छ । त्यसैले डरलाग्दो वा खराब सपना देखेपछि त्यसले हामीमा चिन्ता पैदा गर्छ । कहिले कहि हामी भयानक सपना देख्छौं । भनिन्छ, यस्तो सपना देख्नुमा वास्तु दोष पनि एक हो । यसबाट छुटकारा पाउने केहि वास्तु टिप्स छ ।